Malunga DIY Electric Rubber - Jomo Technology Co., Ltd
Kunye Rubber zombane ishushu kwaye kwamkelwa ngabantu abatsha mihla, logama nje ngumnikazi obalaseleyo ibhodi umncono zombane , kusenokwenzeka ukuba abanye DIY kuxhomekeke zabo. Kutshanje ndifumanisa ethile Rubber cool DIY kwi Instagram.
Pace: A ekhawulezileyo E-longboard kuya kukunceda ukuba uphumelele kuyo wakho ixesha. Isantya 30km oqhelekileyo ngeyure, isantya phezulu nga kwafika 45km ngeyure nganye, yiya ngokukhawuleza. Olunye uvavanyo sisixhobo ukuba Rubber yombane iza ukuhlangabezana nazo zonke kwangemihla, ezifana elifutshane Uhambo, ukuya ezivenkileni njalo njalo.
Okulandelayo Koowheel umthengi ibonisa of Electric longboard Rubber D3M ukuba ezikhethiweyo Instagram. Nguwuphi na othanda? Ba cool yaye kumnandi. Koowheel i kakhulu Rubber nendlela yombane ukuba umxhasi isiseko elikhulu abalandeli ukuba ukumangaliseka ukusebenza kwayo. Kutheni kushushu kangaka? Kuyinto Dual brushless Hub-Motors, 7-inwebu CanadianMaple Wood + iglasi ifayibha (ozikhethelayo) Umhlaba ukucoca, yi 85mm (3.35inch), ifanele zonke iindlela esixekweni. Ngaphezu koko, replaceable pack ibhetri, 2pcs Imiqulu battery unokuthatha 60km, yiya elide. Ngoko babelindele eliphezulu kwaye sifeze xa okokugqibela efika.
Xa nibona ezi DIY ezobugcisa, Ingaba unayo ingcamango ekhethekileyo ngakumbi engqondweni yakho? iingcamango ezininzi zidalwe ngabantu, unako ubonise izimvo zakho kangangoko kunokwenzeka emva koko nceda wabelane nathi tag Koowheel kwi Instagram wakho. Koowheel website esemthethweni kunye Facebook uya kwabelana ngamava akho KOOWHEEL.
Abakwazanga uhambo, kodwa wafunda ngexeshana elifutshane. Ezi zinto bawo iyonke ukuba zajikeleza. Yithabathele kuwe phezu izithuthi zikawonke ndikhwele kwi yokuhlala indlela yakho ngayo. Kutshanje, Koowheel yaphuhliswa Generation 2nd Electric Rubber Kooboard namavili replaceable. Ngoku Odola ukuba yamkelwe. Mhlawumbi uya kucela ukuba yintoni entsha nge-2 nd isizukulwana elinye? Makhe ndinixelele yi ngezantsi.
2. ekude New
350W New x 2 Motors namavili replaceable DB
design Unique kuya kunceda Motors okupholisa maximumly
izihlanganisi ezintsha umba bakuphepha battery eziqhagamshelayo
Inkqubo entsha iza kukhusela ibhetri ukusuka phezu lihlawuliswa unyathela okungenisa. Ke Kooboard uya ligqobha indlu kancinci stop. New onyx sinendawo & Bambelela Tape, kwaye ngaphezulu ...